musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Andriy Yarmolenko Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi
Yakapedzisira Kugadziriswa pane January 27, 2020
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "The New Sheva". Yedu Andriy Yarmolenko Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakaitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Andriy Yarmolenko Hupenyu Hwepamusoro- Iyo Ongororo
Kuongorora kwacho kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga & hwemhuri, dzidzo & basa rekuvaka, hupenyu hwebasa repakutanga, mugwagwa kune mukurumbira nyaya, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hukama, hupenyu hwemunhu, hupenyu hwemhuri, mararamiro nezvimwe.
Ehe, munhu wese anoona Yarmolenko seanodzika tsoka ane ziso rekurova zvinangwa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Andriy Yarmolenko's biography iyo inonyanya kufadza. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Andriy Yarmolenko Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Andriy Yarmolenko akaberekwa pazuva re23rd raGumiguru 1989 kuna amai vake, Valentyna Yarmolenko uye baba, Mykola Yarmolenko muguta reRussia rechiteshi chengarava reSt. Ndiye mwana wekutanga kubva muvana vaviri akazvarwa kune wake akanaka kufara- vabereki vanoratidzwa pazasi.
Andriy Yarmolenko's Baba naAmai vari mukunyemwerera. Chikwereti kuna IG
Ivo vaviri vabereki vaAndriy Yarmolenko ndevaUkraine. Vakasarudza kuva nevana vavo muguta reRussia reSt. Nhengo dzese dzemhuri yaAndriy Yarmolenko vane kwavakabva kuKulykivka Raion, Chernihiv Oblast, Northern Ukraine. Iye zvino ngatitii tikuudze chikonzero nei vabereki vake vakatamira kuRussia.
Mushure memuchato pakati pevabereki vake, amai vaAndriy vakapihwa basa rinobhadhara muguta reRussia rechiteshi chengarava reSt. Akafunga kusiya murume wake achangoroora muUkraine kuti anogara kuRussia. Nguva pfupi Andriy aberekwa muRussia, baba vake vakatama kubva kuUkraine kuti vabatane zvizere naamai vake.
Andriy Yarmolenko akakurira mumhuri yepakati mhuri yemhuri kwatingafungidzira kuti mai vake ndivo muridzi wemhuri anotora basa rake kuRussia. Iwe pane imwe nguva vachiri Yarmolenko mudiki achiri mukomana, vabereki vake vakaita u-kushandura pekugara. Kune zvimwe zvikonzero zvisingazivikanwe, mhuri iyi yakatamira kunzvimbo yavo yekuzvarwa- iro guta reChernihiv, North Ukiraine panguva diki Andriy Yarmolenko aingova mukomana.
Andriy Yarmolenko Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Dzidzo yebhola yakatanga muChernihiv, iro guta muUkraine ndimo maikakurira Yarmolenko. Kare ikako, vekuUkraine uye AC Milan ngano Andriy Shevchenko ndiye aive mufambi wenhabvu munhu wese ainamata. Kuna Yarmolenko, zvaive zvekutevera tsoka dzechidhori chake uyo panguva iyoyo aive achitamba nekutambisa zvinyorwa paDynamo Kyiv.
Andriy Yarmolenko Akatema Shevchenko pamazuva ake ekutanga. Kiredhiti Radio Free Europa
Semukomana mudiki, Andriy Yarmolenko yakanga isingafarire iyi mitsva yemutengo wematoyi. Zvese zvaaida yaive bhora. HKubatsira ngano yenhabvu (Andriy) sezita rake, zvinongoitika kuti mukomana mudiki adanane nemutambo wakanaka.
Sezvo panguva yekunyora, kuyeukwa kwakanyanya kwese kweudiki kwaYarmolenko kuri kuchengetwa se tattoo pamaoko ake. Pazasi pane mufananidzo we tattoo yaAndriy Yarmolenko uyo anomutora semukomana aine bhora rebhora achitarisa akatakura pfuti.
Andriy Yarmolenko Dzidzo uye Basa Rekuvaka. Kiredhiti WTFoot
Yarmolenko aive mhando yemwana aizotora bhora renhabvu chero kwaanoenda. Kune vabereki vake, pakanga pasina kumbove nekusahadzika kwakawanda kuti aive achienda munzira chaipo sekuonekwa kwake mukuenderera mberi kwekuda kupeta mamaki ake. Paakadaidzwa kuyedza yake yekutanga yenhabvu, mufaro wevabereki vake hauna miganhu.
Andriy Yarmolenko Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Yunist Chernihiv kirabhu chomunharaunda muguta rake akagamuchira Yarmolenko mumutambo wake wezvemutemo mushure mekuedzwa kwakabudirira navo mugore re2002. Yarmolenko aida kwazvo uyo aida kwazvo kubudirira akarwisa nzira yake mimwe mapoka matatu evechidiki anoti; Desna Chernihiv, Lokomotyv naVidradnyi Kyiv pakati pemakore e2002 kusvika 2004.
Mugore re2004, Yarmolenko akaita chisarudzo chekudzokera kuChernihiv, kirabhu yaakatangisa basa rake rehudiki nekuda kwekutadza kwake kutsungirira zvaakada kurovedzwa kubva kumakirabhu apfuura. Akagara naYunist Chernihiv kwemimwe nguva ye2 iyo yakamuona achipedza zvidzidzo kubva kuZvikamu asati aenda kune imwe kirabhu (Desna Chernihiv) kutanga basa rake repamusoro.
Andriy Yarmolenko Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Paaive paDesna Chernihiv, Andriy mudiki akatanga kuona mikana yekutamba nhabvu yake kuEurope. Kwaari, kwaingova neimwe nzira yekubuda- ndiyo; ichitevera nzira yebasa yechifananidzo chake- Andriy Shevchenko.
Nekuda kwekutarisira kwakakura kwakaiswa pamiedzo naDynamo Kyiv, murwere Yarmolenko akasarudza kusiya-basa rake nekubatana nechikwata chevechidiki chechikwata ichi- Dynamo-2 Kyiv. Nekudzvinyirirwa zvishoma, akashanda nzira yake kupinda muchikwata chechikwata chikuru.
Pa 11 mai 2008, Yarmolenko zviroto zvekubhadhara timu yepamusoro Dynamo zvakazoitika. Paaishandiswa sekuruboshwe uye pakati-mberi, akaenderera mberi kukora 99 zvinangwa, iro raimuona achidanwa zita rekuti "mutsva Andriy Shevchenko / New Sheva"Nevatori venhau. Andriy Yarmolenko meteoric kusimuka kwakamuona achisvika kuhwina yakati wandei kwekirabhu.
Andriy Yarmolenko Mugwagwa weFame Nhau. Kiredhiti FC Dynamo Kiev uye IG
Andriy Yarmolenko Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Sezvo ku2017 dzinoverengeka yepamusoro makirabhu eEuropeana akatanga kuisa dzvinyiriro kune nyeredzi murume achitenda nehunhu hwake hwemuviri wakanaka, kupfura uye kumhanya. Borussia Dortmund yakakunda pakati pezvinyorwa zvemakirabhu epamusoro anopemha pamabvi avo kusaina kwake. Yarmolenko haana kuzogara pakirabhu kwenguva yakareba sekupa-mvura yekudiridza yakauya iyo yaakange asingakwanise kuramba.
Kukurumidza kuenda kuOnNNUMX Chikunguru 11, Yarmolenko parizvino anonakidzwa nhabvu yake kuWestham FC uko anoumbwa mushandirapamwe mushandirapamwe nevamwe vatambi vake kunyanya Maka Noble- mutungamiri wezvemweya weblabhu uyu anomupa chikafu nemadyeti apo anocheka kuburikidza nekodzero yekukora zvibodzwa.
Andriy Yarmolenko anopemberera kukunda kwestham naMark Nobile. Kiredhiti FootballFaithful
Iwe ungangodaro usina kusvika pakakwirira chakaiswa naUkranian ngano Andriy Shevchenko, asi Yarmolenko, pasina kupokana, chikamu chakakosha isingagumi kugadzira mutsara wekushamisa vatambi kurwisa kuti vabuda muUkraine. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Andriy Yarmolenko Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Sekutaura kunoita; kumashure kwemurume akabudirira, pane mukadzi. Muchiitiko ichi, kumashure kweanobudirira mumwe mubhola, zvirokwazvo kune musikana akanaka kana Wag. Nezve budiriro, iyo gore 2011, apo Yarmolenko akakunda muUkraine Premier League mutambi weGore aisazombokanganikwa.
Iri raive gore Yarmolenko akaroora musikana wake iye-musikana anoenda nezita- Inna. Waizviziva here? Mukadzi waYarmolenko inyanzvi mune zvekunze uye zvakare director weThe American Charity Fund. Chokwadi ichi chinoburitsa kuti akapusa uye akadzidza kwazvo.
Sangana naAndriy Yarmolenko Mukadzi Wake- Inna Yarmolenko. Chikwereti kuna IG
Pamwe chete, murume nemukadzi vese vanokomborerwa nevanakomana vaviri vakanaka vanoenda nemazita avo Ivan naDanylo. Ivan uyo ari dangwe mwanakomana akaberekwa pazuva re22nd yaMay 2013. Pasi pane pikicha yevanakomana vaviri sezvavanofarira nguva yekupaka papaki.
Andriy Yarmolenko ane vanakomana vaviri- Danylo (Kuruboshwe) naIvan (Kurudyi)
Semubereki, Andriy Yarmolenko ane chikwereti kwaari, ibasa rekuisa hwaro hwekutevera kwake vana vake. Zvinogona kumuomesera kubata pamudyandigere kana nguva yacho yasvika, nokudaro kudiwa kwekuenderera mberi achirarama zviroto zvake kuburikidza neanenge mumwe wevanakomana vake.
Andriy Yarmolenko achiumba mwanakomana wake Ivan pakutevedza kutengeserana kwake
Andriy Yarmolenko Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kusvika pakuziva Andriy Yarmolenko hupenyu hwepamoyo kure negomba rekutamba kwaizokubatsira iwe kuti uwane mufananidzo wakazara wemunhu wake.
Kunze kwenzvimbo, Yarmolenko ane hushamwari, eccentric, ane simba uye anogona kuachinjika nyore kumhando dzese dzesimba rakamupoteredza. Fans vanomuziva kunze kwebhola vanogona chaizvo kunakidzwa nekambani yake.
Kusvika pakuziva Andriy Yarmolenko Hupenyu hwega kubva padanho rekutamba. Chikwereti kuna IG
Andriy Yarmolenko Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Pakutanga, zvaive zvekutamira kuRussia kunotsvaga hupenyu hwepamoyo. Nhasi, Valentyna naMykola vanoratidzwa pazasi vakagadzira nzira yavo yekuna rusununguko rwemari kuburikidza nemwanakomana wavo.
Andriy Yarmolenko naamai vake nababa. Chikwereti kuna IG
Nepo baba Andriy Yarmolenko baba Mykola vanoramba vari kure nevezvenhau, zvakafanana hazviitike kumukadzi wavo nemwanasikana. Pazasi pane mufananidzo waValentyna pasi pematenga akajeka nemwanasikana wake mumwe chete.
Andriy Yarmolenko Amai uye Sista. Credits: IG
Nguva yemazuva ekuzvarwa inguva dzekufara dzemhuri yekwaYarmolenko. Pazasi pane mufananidzo we ChiUkraine mberi pamwe chete nemwana wehanzvadzi yake pazuva rekuzvarwa kwake. Kuzvipira kwake pakuita kuti ave nechokwadi chekuti hama yake chete yakagadzikana yakafanana nekuzvipira kwaanoisa mairi.
Andriy Yarmolenko Sista. Chikwereti kuna IG
Andriy Yarmolenko Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi - LifeStyle
Kutonga kubva kune rake rezvemagariro media, zvinoita Andriy Yarmolenko mutambi wenhabvu akangwara uyo anochengetedza imwe mari pazuva rinonaya. Iko hakuna zviratidzo zvekushandisa zvakawandisa uye kurarama hupenyu hwakanaka, sekucherechedzwa nemaoko mashoma emotokari dzinoshamisa uye dzimba huru.
Andriy Yarmolenko Mararamiro. Chikwereti kuna IG
Andriy Yarmolenko Vana Vechidiki Nhoroondo uye Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Iyo Yekureba Inomirira Feud: Mumutambo muna Gumiguru 2015, Andriy Yarmolenko akaita dambudziko rine njodzi iro rakapwanya gumbo remupikisi weShaktar Donetsk anonzi Taras Stepanenko. Ivo vaviri vakayananiswa mushure memutambo uye vakachinjana majerizi, asi mushure maizvozvo, Yarmolenko akakanda jasi raStepanenko pasi apo akatenda vateveri vaDynamo. Zvakare, mune mumwe mutambo, Yarmolenko akarova Stepanenko mushure mekunge mutambi weShaktar akatsvoda bheji rake uye akapemberera nehasha pamberi pevateveri veDynamo panguva yekukunda kwake 3-0.
Kuda kwavo kwaitungamira kunetsana kukuru pakati pezvikwata uye neimwe nguva, zvaiita sekunge boka reKukranian rose raive muhondo. Nei Ukranian muchikwata? imhaka yekuti kuwanda kweEuro 2016 kwaitsamira pavatambi veDynamo neShtartar Donetsk. Tsotsi iyo yakatanga kubva kuvatambi vese vaviri yaityira kukanganisa nyika Euro 2016 kuronga kudzamara vese vatambi vanoratidzwa pazasi vaita rugare, vachiisa nyika yavo pamberi pavo.
Andriy Yarmolenko naTaras Stepanenko vaifanira kuisa nyika yavo pekutanga. Kiredhiti BBC uye DailyMail
Nhamba Yake Isingaverengeke Yekuremekedza: Zvichida iwe unogona kunge wakambocherekedza Yarmolenko panguva yekugara kwake muDortmund kana Westham. Asi chausingazive ndechekuti; iye ingano munyika yokumusha kwake. Yarmolenko yakatonga nhabvu yeUkraine nhabvu uye yeUkraine nhabvu yakawanda kwemakore seyakaonekwa mukukudza kwake kunoshamisa pazasi.
Andriy Yarmolenko Untold Chokwadi- Akawanda aanokudza. Chikwereti kuWikipedia
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Andriy Yarmolenko Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.